Dhamma – Dhammadīpa
Posted on5Oct 2019 by Ashin Sopāka
a state of mind without boundaries.” – Snp 1.8
” Mātā yathā niyaṁputtaṁ—​
Mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ. ”
မိခင်သည် ရင်၌ ဖြစ်သောတစ်ဦးတည်းသားကို
အသက်ရှင်စေရန် အစဉ် စောင့်ရှောက်ဘိသကဲ့သို့ ဤအတူပင်
မရှိသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွါးများရာ၏။
“Giống như người mẹ bảo vệ đứa con trai của mình,
đứa con trai độc nhất, đến trọn đời,
nên phát triển tâm ý vô hạn lượng.”
Top: Greater Racket Tailed Drongo
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, loving kindness, metta, mother
Posted on 21 Sep 2019 by Ashin Sopāka
“Forabhikkhu who isalearner
There is no other thing so helpful
For reaching the highest goal
As the factor wise attention.
Wisely strivingabhikkhu may attain
The destruction of all suffering.” Iti 16 (9)
dhammo sekhassa bhikkhuno;
Natthañño evaṁ bahukāro,
Yoniso padahaṁ bhikkhu,
khayaṁ dukkhassa pāpuṇe”ti.
”ယောနိသောမနသိကာရသည် သေက္ခရဟန်းအား မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရန်ကျေးဇူးများသကဲ့သို့၊ ဤအတူ ယောနိသောမနသိကာရမှတစ်ပါး အခြား ကျေးဇူးများသောတရားမရှိ၊ အသင့်အားဖြင့်အားထုတ်သော ရဟန်းသည် ဆင်းရဲကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
“Tác ý đúng đường lối là pháp của vị tỳ khưu hữu học,
không có cái khác có nhiều sự ích lợi như vậy đối với việc đạt đến mục đích tối thượng.
Trong khi nỗ lực đúng đường lối,
vị tỳ khưu có thể đạt được sự diệt trừ khổ đau.”
Sunda Flying Lemur, aka Colugo (top: female; bottom; male)
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, wise attention, yoniso manasikara
Posted on 14 Sep 2019 by Ashin Sopāka
For having slain that, one does not sorrow.” SN 1.71
“Kodhaṁ chetvā sukhaṁ seti,
kodhaṁ chetvā na socati;
Vadhaṁ ariyā pasaṁsanti,
“Sát phẫn nộ được lạc,
Này Hiền giả Thiên nhân.”
To: Plantain Squirrel
Bottom: Malayan Giant Squirrel
Posted in Dhamma	| Tagged anger, dhamma, sleep
Posted on7Sep 2019 by Ashin Sopāka
“In five ways shouldawife as the western direction be respected byahusband: by honoring, not disrespecting, being faithful, sharing authority, and by giving gifts. And, the wife so respected reciprocates with compassion in five ways: by being well-organized, being kindly disposed to the in-laws and household workers, being faithful, looking after the household goods, and being skillful and diligent in all duties.” DN 31
“Pañcahi kho, gahapatiputta, ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhātabbā – sammānanāya anavamānanāya anaticariyāya issariyavossaggena alankārānuppadānena. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi sāmikaṁ anukampati – susaṁvihitakammantā ca hoti, sangahitaparijanā ca, anaticārinī ca, sambhatañca anurakkhati, dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi sāmikaṁ anukampatianukampati: has pity on. Evamassa esā pacchimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.”
သူကြွယ်သား ငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် လင်သည် အနောက်အရပ်မည်သော မယားကို ပြုစုအပ်၏။ အမြတ်တနိုး ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။ နှိမ့်ချ၍ မခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။ မိမိမယားကို လွန်၍ အခြားမိန်းမတို့၌ မပျော်ပါးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။ စဖိုဆောင်အုပ်စိုးမှုကို လွှဲအပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။ အဝတ်တန်ဆာကို ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း (ပြုစုအပ်၏)။ သူကြွယ်သား ဤငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် လင်သည် ပြုစုအပ်သော အနောက်အရပ်မည်သော မယားသည် ငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် လင်ဖြစ်သူကို စောင့်ရှောက်၏။ အမှုကြီးငယ်ကိုလည်း ကောင်းစွာ စီရင်၏။ နှစ်ဖက်သော ဆွေမျိုးကိုလည်း ချီးမြှောက်၏။ မိမိလင်မှတစ်ပါး အခြားယောကျာ်း၌ လွန်ကျူးသော အကျင့်မှ ကင်း၏။ ရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့သော ဥစ္စာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏။ အလုံးစုံသော ကိစ္စတို့၌ လိမ္မာ၍ ပျင်းရိခြင်းကင်း၏။ သူကြွယ်သား ဤငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် လင်သည် ပြုစုအပ်သော အနောက်အရပ်မည်သော မယားသည် ဤငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် လင်ကို စောင့်ရှောက်၏၊ ဤသို့ပြုစုသည်ရှိသော် ဤအနောက်အရပ်သည် လုံခြုံ၏၊ ငြိမ်းချမ်း၏၊ ဘေးကင်း၏။
“Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này Gia chủ, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.”
Top: Yellow Vented Bulbuls
Below: Urostylididae – Urolabida sp (related to stink bugs)
Posted in Dhamma	| Tagged compassion, dhamma, husband, wife